トップページ ＞ 言語 ＞ ソマリ語 ＞ qowladda Bisha bartamihii bartamihii pachinko-of feature (xiliga soo kabashada, ama nolosha furan)
※ inay socon sida arrimuhu u ah warshadaha oo dhan kuwa
pachinko jecel Fadlan tixraac waa, sidoo kale laga yaabaa in dadka aad taqaan, in ay u tartamaan qowladda pachinko waa badhtamaha bisha waxaa lagu talinayaa in ugu . In qowladda pachinko ah, laakiin aadan wax dhacdo hadda, haddii loo ekaysiiyaa dhacdo, waa inuu jiraa kartaa dukaamo badan in arrinta in heshay weyn, sida ay dhacdo calaamad. In
, waxa ay noqon doontaa sababta waqti aad u soo saari heshay noocan oo kale ah, oo ka hadlaya in la keeno bartamihii, ku lug lahaa qorshe badan oo ganacsi. Qorshaha waxqabadka ganacsiga ee qowladda pachinko yahay, ee hagaajin ciddiyaha caadiga ah iyo goobaha bishii kowaad, waxaan ka dibna ku bilaaban doono. Wakhtigan, xataa dhexda waxoogaa yar, waxa ku hayaa kayd ah ilaa xad in dabooli karaa hoos u dhaca dhaqaalaha.
haddii, xataa sidii aad u soo baxay hoos u dhaca dhaqaalaha, sidoo kale ka soo bixi waqti ku filan in ay dib qeybtii labaad haddii dhexe. Sidaas daraaddeed, iyadoo kooxda martida pachinko ah, kulanka, sida bixinta heshay weyn waa celceliska in ay tahay ganacsiga ugu fiican si fudud lagu noqon dhexe. In, waa waxa ku soo xad dhabta ah ee ganacsiga, laakiin waa bilowga bisha ku xiran tahay qayb ka mid ah sidoo kale, haddii ay gaari bartilmaameedka bishii kowaad, oo aad had iyo jeer u saaray. Tan iyo maalintii
kaliya sababtoo ah ma aha in miiska oo dhan si ay arrinta sixitaanka sida, dhibic in maanka, isku day in aad si fiican u dhawrtaan oo sixitaanka ah. sixitaanka ciddiyaha waqtiga ay dhacdo, sida caadiga ah ee la qabsiga wuxuu ku salaysnaan doonaa. Ka soo qaad inaad tahay in ay qarka u saaran inuu 12.5 mm ciddiyaha caadi ah bilowga. In dukaamada sida, haddii ay jiraan waa diyaar in la siiyo, qiyaastii illaa 13 mm iman doonaa furan. Isagoo ka hadlayay
xawaaraha wareeg ah, xawaaraha wareeg ah hal daqiiqo, 0. The kala duwan hal mar ka 5 jeer. Diintooda waa mid ku kala duwan yihiin, laakiin haddii aan ka jeestay, halkii waa sababta aan ma iman, waxaan si weyn u kala duwan yihiin Raadinta at lacagta maalgelinta guud ee lacagta. Istaag ka baxsan sida line xadka ayaa sidoo kale, si ay u soo baxaan waa waxaan ula jeedaa in badhtamaha bisha. Markaas, bartamihii ee adduunka hore ee mushaharkaaga, 's markii ay sidoo kale soo baxay wax badan oo ka mid ah kuwa u malayn in doonayaa in aan ku guuleysto iman. Haddii dukaanka aad isticmaalayso set oo ah
Horukon, dabcan, waxaa laga yaabaa inay noqdaan set macaan ee Horukon.
qowladda pachinko qorshaha ganacsiga, sidoo kale ayaa ku lug lahaa xaalado laabta badan oo qof walba sida. Oo sida, inta badan indhaha Ujeedada dhexe waa meesha aad rabto in aad sidoo kale la xasuusto in aysan ahayn mid kaliya dhacdo. Oo maalintii dhacdada waa dabcan ah ujeedadoodu indhaha, laakiin gaar ahaan haddii ay dhacdo in uu ahaa dud a, ka dibna, dhowr maalmood waa indhaha Ujeedada dheeraad ah.
Sababtuna waxay tahay mid aad u fudud, si ay u doonayaan in ay la dhig image in uu u soo baxay si macaamiisha dhinaca qeybtii labaad ee bisha, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in halkan noqon. Zendai xitaa sida ay tahay wax aan macquul aheyn, sida model ah boor, aad musmaarro iyo goobaha ku jira kiisas badan oo dhowr maalmood raagtaa. Haddii ay dhacdo in maalinta ku xigta, iwm, oo lagu daydo oo caan ah sida, lagu daydo in ay yihiin riixaya Maadaama uu suurtagalnimada in sare, waxaan leeyahay in si sahlan loo fahmi indhaha Ujeedada ugu fiican.
in tii pachinko oo la doonayo in caadi ciyaaro, sidan aynu nahay ganacsi ka fiirsan socodka bil ah. Dagaal si caqli ah waxaa loogu talagalay faa'iido ah ee xaqiiqda ah, in ay tahay muhiim in aan kor u jaaniska ah ku guuleystay. Taasi waa image si ay u doonayaan in ay la dhig, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in halkan noqon. Zendai xitaa sida ay tahay wax aan macquul aheyn, sida model ah boor, aad musmaarro iyo goobaha ku jira kiisas badan oo dhowr maalmood raagtaa. Haddii ay dhacdo in maalinta ku xigta, iwm, oo lagu daydo oo caan ah sida, lagu daydo in ay yihiin riixaya Maadaama uu suurtagalnimada in sare, waxaan leeyahay in si sahlan loo fahmi indhaha Ujeedada ugu fiican.
in tii pachinko oo la doonayo in caadi ciyaaro, sidan aynu nahay ganacsi ka fiirsan socodka bil ah. Dagaal si caqli ah waxaa loogu talagalay faa'iido ah ee xaqiiqda ah, in ay tahay muhiim in aan kor u jaaniska ah ku guuleystay.